"Me Caawimada Talo in la dhiirrigeliyo My manida Trade" (3)
Anigu ma shaki dalab kasta oo lacag ka dhigaysa nin ee u wareegtaan moral haywire tago. ganacsatada shahwada waxaa si qabtay in ay doonayaan lacag dhex beero abuurka lacag caddaan ah in la siiyo tixgelin ah in saameynta moral ee u janjeera noocan oo kale ah si cad u muuqataa aan jirin. Kuwa ayaa u codeeyay Ganacsi eneysa ay (la "dabiiciga ah mar walba buuxsama doonaa" danbe ee fikirradoodii), waa in ay tixgeliyaan ka asturi socda ee bixinta ganacsiga ee shahwada naf wax ku ool ah la baadhi:
– In jawi sida tan, halkaas oo u hogaansanaanta 'wax ka mid ah dhaqanka' waxaa si weyn u tiirisay, Deeqdan kaliya ee eneysa waa laga hadlin, la hadal yar bixintii mid eneysa lacag caddaan ah. Si looga fogaado aragti dadweynaha wax la hollin, Waxaan ka shakisan tahay ganacsatada manida mar walba eegi lahaa garbaha, bidix iyo midig, ka hor inta uusan u dhowaanin iridda baanka manida kasta.
– In kasta oo shahaadada sare ee qarsashada ama magaciisa ku lug, waa ganacsi shahwad aan aragti kale oo dhillo ah lab? Xataa halkaas oo dhillo ah waxaa tagged 'xirfad ugu da'da weyn', Waxaan la yaaban ahay sida badan si cad u Percara karaa sanaaduuq ay u ka qayb waa in.
Isla sidaas ayaa weli heysta ee soo socda:
– In line waxa la dhigantaa laga yaabaa in 'iibka qaldan ee marketing, maxaad u malayn dhici lahaa haddii qof dumar ah oo ka dhabeeyo for is cufay marayo hab this ka dib ay ogaadaan in ay wax soo saarka (ilmaha) ma sawir sifooyin kuwa (e.g. looks wanaagsan, athleticism, sirdoonka, iwm) hore u dallacsiiyey by Baanka manida ee? Mid ka mid ah waa in aan xitaa meesha ka saaro, sida qiyaas farqiga stop ah, eneysa in inta badan ka dhakhaatiirta iyo shaqaalaha ay lab soo gaadhi kari waayeen. Halkee sida dhacdaa, iyadu weli aqbali doono iyo ilmaha jecel shuruud la'aan?
– Waxaa hubaal ah in eneysa (gaar ah oo tayo leh 'fasalka A') helay in foomkan laga yaabaa isagoo qaybsama soo saarka ee uurka ku dhaca dumarka kala duwan, mararka qaarkood codsatay meelo ka baxsan xarunta bacriminta aqbaliddoodii gaar ah. Tani waxa ay xasuusinaysaa mid ka mid ah biqilka of abuurka ah ee warshad in carradu of dhowr Jannooyin ay dibada. In Nigeria, Waxaan ogahay aaneeyay sida in a 'U Kaxeysto-nin' ka dhigaysa dhiibi dhegta.
– Qaar ka mid ah cilmibaarisyadii 'la yidhaahdo' carruurta soo saaray iyada oo taasi ka dhigan tahay mararka qaarkood cilladaha lagu dhasho; suurtagalnimada weyn ee isticmaalka mukhaadaraadka, cudurka maskaxda iyo dhaqanka dambi marka ay noqdaan dadka waaweyn
Sidoo kale, samaynta manida laga heli karaa foomkan cadaynaysaa sida rag hantida kaliya, kaas oo sida halmaan karaa marka aan loo baahneyn; ama tijaabooyinka, shaybaar (e.g. jiir) iyo lo'da beerta in la lisay. Kaasu wuxuu i xasuusineysaa xaraashka ama xoolo suuq, halkaas oo shay ah (kiiskan, rag) waxaa ka qortay, haweenka waxa ay doortaan, iyo bamm! - Heshiis A waxaa ku dhuftay. Wax waddaa ka mid ah sida caadiga ah - faaiideysataa marka loo baahdo, ka dibna soo qulquli doona marka aan waxtar lahayn. ganacsatada manida Kuwani, indhahooda on lacag, guul daraystaan ​​in ay arkaan in habka ururinta manida hoos iyo objectifies nin.
Maxaa ku saabsan arrinta consanguinity (i.e. la xiriira dhiig ahaan ama iyada oo loo marayo soo jeeda ka awoowe isla)? Waa in aynaan iska eafiya iskana xaqiiqda ah in incest laguma faafin karo this, haddii aan ka fiirsan suurtagalnimada of xiriirka galmada u dhexeeya lammaanaha kuwa aan garanayn u yihiin wax soo saarka ee bixiyaha shahwada isla (aabbahay). Haweenka manida karaa qaata, iyadoo rajo ka qabo bixiyaha manida isku mar ka badan (si ay u gaaraan isagoo aabbihiis la mid ah nafleyda), had iyo jeer waxay doonayaan gaaro this? Yaa ayaa sheegay in bixiyaha isla mar walba laga heli doonaa si loo hubiyo uurka mustaqbalka ka il la mid ah?
Markaad eegto waxa hesha in ay goosashada ee ganacsiga this shahwada, carruurta, waa in aan is illowsiin kuwan:
– dhacdo this sii kordhaya ee ganacsiga sale shahwadu ma keeni doontaa in Abuur ula kac ah ciidan ee carruurta agoonta ah ee mustaqbalka? Halkee waa hadafyada waalidnimada caadiga ah iyo qiyamka bulshada sida meesha ninkii waalid, kaasoo la filayo in ay bixiyaan taageero dhaqaale ee markaas naagta iyo carruurteedaba? In maskaxda ganacsatada manida, Waxaan la sawirto waxa uu noqon lahaa sababta dhibaato ku saabsan qoyska marka dheecaan u abuuraya sida dhali karaa lacag fudud. tani ma khalkhal doonaa iyo musuqmaasuq bulshada, weheliyaan jeestay fikradda ah aabanimada foorari? Waa wax caadi ah in aadanuhu waa in carruurtooda u daryeelayaan. Saamaynta waxyeello of arrimuhu yaqaan awowayaashiin maqan bulshada this waa arrin cad oo.
– Haddii rag badan oo ma kala jeclin, waxa ku saabsan fariin muhiim u ah carruurta? Sida kids, ilaa aan koray la miyir ku saabsan waxa ay qabtaan, waayo, nin iyo aabbe waa. Waa wax iska cad in bixiyeyaasha manida, kuwaas oo ha siin hoot ah 'ee ku saabsan marka, halkaas oo, ama kan caruurta ay dhashay?
– Habboon tahay in aannu iska eafiya iskana xuquuqda ilmaha? Sow ma aha qayb ka mid ah xuquuqda aadanaha ee qofka ku garanayaa kii isaga ama iyada aabbihiis iyo hooyadiis waa noolaha? Macnaha Nigeria, maxaad u malayn dhici lahaa maskax in wax soo saarka ee bixinta manida 'dibadda', haddii isha of sida isaga ama iyada soo gelin jiritaanka noqdo ka dib loo yaqaan ee nolosha?
sharciyada la xiriira
Raadinta at waxa "Arrimaha kale ee la xiriira" ka dhigan tahay qayb ka mid ah appellation ee hay'adda fulinta sharciga ee khuseeya dalka this ee, Hay'adda Qaranka ee Mamnuucidda ee Traffic in Dadka & Arrimaha kale ee la xiriira (NAPTIP), ganacsiga ee eneysa waa cad sharci darro ah in Nigeria. In si kooban u dhigo, shuruucda dalka Nigeria si dhab ah u baaqi at sale ama ganacsiga ee aadanaha, qaybo jidhka, iyo sidoo kale dheecaanka in unkamayaan sida. (Si aad u la sii wadi).
Be the first to comment on ""Me Caawimada Talo in la dhiirrigeliyo My manida Trade" (3)"